downloads 12 713
Zuru okè ụgbọ elu ụgbọ elu nlereanya, na ụgbọelu bụ nnọọ kemfe, dị nnọọ ufọk ufene. Ụda olu dị gbanwetụrụ site rogkoooo-eme ka ha ndị ọzọ kwesịrị.
The Beechcraft King Air bụ ezinụlọ ejima turboprop ugbo elu-amịpụta Beechcraft Queen Air nke ha dị iche na mbụ, e wezụga engine, a pressurized fuselage. Ezi nọchiri nke beech 18 King Air hụrụ ọtụtụ obodo na agha nmepe. The Beechcraft Na-21 Ute bụ ngwakọ version, na-abụghị pressurized, kpọmkwem mepụtara maka US Army, nke VC-6 na T-44 u yiri ihe Model 90 nkịtị na n'okpuru designation C-12 Huron hụrụ ọtụtụ Model 200 na 350. The beech 99 na Beechcraft 1900 ugbo elu bụ azụmahịa iga nke otu ezinụlọ, ndị Beechcraft 1300 version nke Model B200 emegharị na mpaghara iga. The Model 90 na-emepụta na-enweghị nkwụsị ebe ọ bụ na 1964.
Eze Air kemgbe ma ka bụ ezigbo ihe ịga nke ọma na-anọgide na ọrụ ha na ahịa ekele ha pụrụ ịdabere, arụmọrụ, na olu nke ụlọ, ọ bụ ike ngwa ngwa gbanwee ibu ìhè ma ọ bụ ịdị ọcha. Ha dị nnọọ ugbu a na fleets nke ikuku tagzi ụlọ ọrụ. (Wikipedia)
Onye edemede: Jasper Gregory Dee Waldron Henry Tomkiewicz